XOG: M/weynaha Puntland oo Garoowe dib ugu laabanaya iyo Amniga Bosaso oo wali howlgalo ka socdaan. – Puntlandtimes
XOG: M/weynaha Puntland oo Garoowe dib ugu laabanaya iyo Amniga Bosaso oo wali howlgalo ka socdaan.
September 29, 2018 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo mudo xileedkiisu gabaabsi yahay ayaa soo gabagabeeyey socdaal uu kujoogay magaalada Boosaaso, waxaana uu dib ugu laabanayaa caasumada maamulkaas ee Garoowe.
Madaxweynaha ayaa dhawaan booqasho ku tagay gobalada Barri, Karkaar iyo Sanaag, waxaana uu la kulmay waxgaradka iyo Isimadda dhaqanka oo ay wada hadalo ka yeesheen arrimaha dalka.
Xogaha ayaa sheegaya in Gaas maalmihii uu safarka kujiray uu la kulmay duqowda dhaqanka oo ay ka wada hadleen amuuraha ku saabsan doorashooyinka soo wajahan iyo ammaanka sidii loo adkeyn lahaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa kusugnaa maalmihii u dambeeyey magaalada Boosaso oo ay ka dhacayeen falal amaan darro, waxaana tan iyo booqashadii Gaas ee Boosaaso la xaqiijiyey in ay dhaceen ficilo Argagixiso.
Laamaha ammaanka howlgalo ay qaadeen tan iyo maalmahaas ayaa lagu sheegay dadka waxyeeladu kasoo gaartay, gacanta ciidanka kudhawaad 9 qof oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Saraakiisha Amniga ayaa kufoogan adkeynta Amaanka xili ay dhaw yihiin ayaamaha doorashada, sidaas oo kale kooxaha Ammaanka ayaa ku mashquulsan sidii kooxaha Argagixisada ah ficiladooda looga hortagi lahaa.